SAWIRRO: Sareeye guuto Kaniif oo maanta kormeeray Saldhiga booliska ee gobolka Mudug | HalQaran.com
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, S/guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi (Kaniif) oo hawlo shaqo u jooggo Magaalada Gaalkacyo ayaa maanta kormeeray Saldhiga Boliiska gobolka Mudug waxa uuna kula kulmay Ciidanka Boliiska ee ku sugan gobolkaas, si uu ugu kuur galo xaaladaha ay ku shaqeeyaan.
Taliyaha ayaa waxa uu kormeer ku sameeyay xarumaha Booliska ee Gobolka Mudug, isagoo ciidamada ku ammaanay sida ay har iyo habeen ugu taaganyihiin sugida amniga Shacabka Soomaaliyeed.
Saraakiisha uu la kulmay ayaa warbixin ka siiyay Taliyaha shaqada Boolisku ay u hayaan bulshada,iyagoo tilmaamay in ay jiraan maxaabiis badan oo ku jirto saldhiga kuwaas oo ku eedeysan dambiyo kala duwan dhawaana maxkamad lasoo taagi doono.
Taliye Kuxigeenka Booliska Soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeeyay kormeerayay Saldhigyada Ciidamada Boliisku ay ku leyihiin deegaannada dowlad goboleedka Galmudug, isagoo u kuur gelayay xiriirka wada shaqeeyneed ee ka dhaxeeya ciidamada iyo bulshad kaas oo muhiim u ah nabad gelyada dalka.
kormeeray saldhiga booliska gobolka mudug
Sareeye guuto Kaniif